DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA EPSON SX 130 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
RAD Studio bụ ebe ngwanrọ nke na-enye ndị ọrụ ohere na Object Pascal na C ++ ịmepụta, dozie ma melite ngwa n'ụzọ kachasị ọsọ site na iji ọrụ ígwé ojii. Nke a bụ nhọrọ dị mma maka ndị chọrọ ide ihe ngosi mara mma nke nwere ike ịrụ ọrụ na sistemụ kesara ma gbanwee data n'ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ.
Mpaghara mmepe ikpo okwu RAD Studio na-enye gị ohere ịmepụta ọrụ maka Windows, Mac na ngwaọrụ mkpanaka. Nke a bụ ngwá ọrụ zuru ụwa ọnụ nke ị nwere ike ide akwụkwọ na Object Pascal na C ++.
VCL ma ọ bụ ọbá akwụkwọ nke ihe ngosi nke RAD Studio bụ setịpụrụ ihe karịrị narị abụọ maka ịmepụta interface Windows nke ga-enyere aka mee ka ngwa dịkwuo ma dị mfe, yana ịkwalite na ime ka mmekọrịta onye ọrụ na Windows dị mfe. VCL na-enye gị ohere ịmepụta ihuenyo dị mma nke na-agbaso ihe niile a chọrọ maka ihe omume maka Windows 10.
Onye nwe akwukwo GetIt kere maka nbudata ngwa ngwa na ngwa ngwa, ibudata na melite ihe ndi ozo, ulo akwukwo na ihe ndi ozo di iche iche site na udi.
Ihe mgbama (mgbama) bụ mmepe nke RAD Studio iji dozie nsogbu nke nyochaa ihe na-ejighi GPS. Mgbama na-enyekwa nkwado maka ihe ndị metụtara nsuso na radial na geometric zones nke ọ bụla usoro.
RAD Studio na-enye onye ọrụ na-edebanye aha, nke a na-emezi site na ngwá ọrụ CodeSite. Nke a na-enye ohere iji akara ngosi nke ederede ederede n'usoro ide ihe omume ahụ ma debugging ya.
CodeSite na-enye onye ọrụ nkọwa zuru oke banyere otú e si egbu koodu ahụ edere ya. Iji mee nke a, tinye naanị onye na-ele ihe anya maka ọrụ ahụ. Ngwaọrụ CodeSite na-agụnye ọrụ njikwa - CSFileExporter.exe, nke na-enye gị ohere mbupụ faịlụ log ngwa na usoro ndị ọzọ dị mma maka onye mmepụta, dịka ọmụmaatụ, XML, CSV, TSV.
Ọ dị mma ịchọrọ na ị nwere ike iji ụdị abụọ Viewers - Live (ọ bụ adaba iji ya na nyocha ngwa ngwa, ebe ọ bụ na emelitere ya ozugbo a natara ozi ọhụrụ na njikwa ozi) na Njikwa (n'eziokwu, onye nyocha faịlụ n'onwe ya, nke nwere ike idozi site na njirisi )
Uru nke RAD Studio:
Nkwado nkwado nkwalite usoro Cross
Ohere nwere ike ịkọkọta ya (na C ++)
Nkwado maka mmetụ aka (Android)
Onye nyocha ihe na-akwado maka ịtọ ntọala na ihe omume nke otu ihe
Nkwado Raster Styles
DUnitX nkwado (nyocha nke otu)
GetIt Manager Library
Nkwado Android version 6.0
Usoro nkwado usoro nkwado
Ngwaọrụ debugging usoro
Detail ngwaahịa akwụkwọ
Ọghọm nke RAD Studio:
Igwe okwu Bekee
Usoro mmepe ngwa na-achọ mmemme mmemme
Enweghi nkwado maka Linux os
Akwụ ụgwọ ụgwọ. Ọnụahịa a na-adabere n'ụdị ya na ọkwa ya site na $ 2,540 ruo $ 6,326.
Iji budata mbipụta ikpe nke ngwaahịa ahụ ga-edebanye aha
RAD Studio bụ ebe dị mma maka usoro mmemme cross-platform. Ọ nwere ngwaọrụ niile dị mkpa maka ịmepụta ngwa ngwa na-arụ ọrụ maka Windows, Mac, yana ngwaọrụ mkpanaka (Android, IOS) na-enye gị ohere ịmepụta mmepe ngwa ngwa site na ọrụ igwe ojii jikọtara.
Download usoro ikpe nke usoro ihe omume AHRD Studio
Android Studio Aptana studio DVDVideoSoft Free Studio Uwe Igwe Ucha
RAD Studio bụ otu n'ime usoro kachasị mma na nke zuru oke maka ịmepụta ngwa desktọọpụ maka Windows na Mac OS, yana maka sistemụ arụmọrụ mobile.
Onye Mmepụta: Embarcadero Teknụzụ
Ọnụ: $ 4050